Notendren'ny Tale jeneralin'ny VoyagesAfriq ny manam-pahaizana momba ny serasera ao amin'ny UNWTO
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Notendren'ny Tale jeneralin'ny VoyagesAfriq ny manam-pahaizana momba ny serasera ao amin'ny UNWTO
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Managing Editor sy CEO an'ny VoyagesAfriq Media Limited, Andriamatoa Kojo Bentum-Williams, dia notendrena ho manam-pahaizana momba ny serasera ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany ao amin'ny UN.
Ity fanendrena ity dia hahita azy hitarika fifandraisana amin'ny hetsika sy hetsika ataon'ny fikambanana any Afrika. Nanan-kery tamin'ny volana martsa 2019 ity fanendrena vaovao ity ary ampahany amin'ny adidiny fototra ny fampiroboroboana ny fandaharam-potoana folo isa an'ny UNWTO any Afrika eo ambany fitantanan'i Zurab Pololikashvili.
Antenaina ihany koa izy ny hiara-hiasa amin'ny Departemantan'ny Africa ao amin'ny UNWTO hanatona ny mpikambana ao amin'ny haino aman-jery afrikanina ary hanao tobim-pitsaboana mba hampiofana sy hampahafantatra bebe kokoa ireo media momba ny fizahan-tany any amin'ny kaontinanta.
Kojo no mpanorina sy tonian-dahatsoratry ny VoyagesAfriq Media Limited, orinasan-tserasera mpandehandeha afrikanina izay mamoaka VoyagesAfriq Travel Magazine Quartely ary miasa amin'ny vavahady an-tserasera VoyagesAfriq.com.
Niasa ho sekretera an-gazety an'ny minisiteran'ny Kolontsainan'ny fizahan-tany sy ny zavakanto famoronana izy taloha hatramin'ny taona 2014 ary mpiasan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa tao amin'ny Manampahefana momba ny fizahantany ao Ghana.
Nandrakotra fihaonambe momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany izy ary hitan'ny maro ho iray amin'ireo manampahefana amin'ny raharahan'ny masoivohon'ny fizahan-tany UN.